शरणार्थी र आप्रवासी लागि काम साक्षात्कार मद्दत | यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
साक्षात्कार को लागि सुझाव: आफ्नो काम साक्षात्कार कौशल सुधार र कसरी कुनै पनि काम को लागि एक साक्षात्कार लागि तयार सिक्न
म किन काम साक्षात्कार लागि तयार गर्नुपर्छ?
एक काम साक्षात्कार तपाईं र कर्मचारी बीचको कुराकानी छ. साक्षात्कार समयमा, को कर्मचारी तपाईं धेरै प्रश्न हुनेछ. के यो एक काम रही सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम को छ किनभने कसरी एक साक्षात्कार लागि तयार जान्नु आवश्यक.
को कर्मचारी आफ्नो काम अनुभवको बारेमा सोध्न हुनेछ. तिनीहरूले आफ्नो शिक्षा र तपाईं छन् कुनै पनि प्रशिक्षण बारेमा जान्न चाहन्छु हुनेछ. आफ्नो जवाफ प्रश्न पनि साक्षात्कार व्यक्ति कस्तो हो देखाउन. तपाईं कसरी एक साक्षात्कार लागि तयार थाहा छ भने, तपाईं काम को लागि एक राम्रो व्यक्ति हुन् भन्ने कर्मचारी देखाउने
काम साक्षात्कार सधैं व्यक्तिमा ठाउँ लिन छैन. तपाईं पहिलो फोन साक्षात्कार हुन सक्छ. तपाईं कम्पनी फाइदा कसरी देखाउन यो मौका प्रयोग. तपाईं फोन साक्षात्कार पारित यदि, त्यसपछि तपाईं व्यक्तिमा अन्तरवार्ता गरिनेछ. धेरै जब लागि, तपाईंले एक फोन साक्षात्कार र कम से कम एक हुनेछ मा-व्यक्ति साक्षात्कार. वा तिनीहरूले तपाईं एक भिडियो कल सेट अप सक्छ.
तपाईं आफ्नो अर्को काम को लागि लागू गर्नु अघि, तपाईं कसरी एक साक्षात्कार लागि तयार थाहा त्यसैले यी कदम प्रयोग र काम रही सफल:
कम्पनी बारे तपाईं सबै पत्ता. यदि तपाईंको प्रश्न र उत्तरहरू व्यापार बारेमा ज्ञान देखाउन, साक्षात्कारकर्ता तपाईं काम ख्याल भनेर थाहा हुनेछ.
तपाईं कम्पनीको वेबसाइट जानकारी मार्फत पढ्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पनि LinkedIn मा कम्पनी को बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ. यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न:
यस कम्पनीको लक्ष्य के हो?
यस कम्पनीको मिसन के हो?
के अहिले कम्पनीको मुख्य परियोजना / काम हो?
आफ्नो कौशल कम्पनी कसरी लाभ उठाउन सक्छौं?
हेर्न Google मा र क्लिक गर्नुहोस् "समाचार" कम्पनी को नाम को लागि खोज तपाईं कम्पनी बारेमा कुनै पनि समाचार फेला यदि. तपाईं राम्रो समाचार हेर्न भने, तपाईं आफ्नो साक्षात्कार मा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ.
मा कम्पनी फेला सिसाको ढोका, जो एक वेबसाइट कर्मचारीहरु कम्पनी कुरा कहाँ छ.
यो एक सार्वजनिक स्थानमा छ भने, यस्तो स्टोर वा रेस्टुरेन्ट रूपमा, मा जानुहोस् र भ्रमण.
तपाईं आफ्नो अनुसन्धान रूपमा, केही प्रश्न सोच तपाईं आफ्नो साक्षात्कार मा सोध्न सक्नुहुन्छ सुरु, र तिनीहरूलाई लेख्न.
आफ्नो रिजुम समीक्षा
तपाईंले पहिले नै बनाएको र आफ्नो रिजुम पठाउनुभएको छ. को कर्मचारी आफ्नो रिजुम लेखिएको केहि बारे थप विवरण माग्न. यो तपाईं साक्षात्कार अघि आफ्नो रिजुम पढ्न महत्त्वपूर्ण छ. के तपाईं काम कम्पनीहरु वर्णन गर्न सक्षम हुन वा विगतमा लागि स्वेच्छा गर्नुपर्छ.
तपाईं जाँदैछन् थाहा
तिमी सक्छौ भने, तपाईंको साक्षात्कार दिन अघि साक्षात्कार स्थानमा एक अभ्यास यात्रा बनाउन. तपाईंको मार्ग सिक्न. यो एक ठूलो भवन छ भने, सही प्रवेश पाउन. त्यसपछि तपाईं दिन को लागि तयार गरिनेछ.
अगाडि योजना र आफैलाई अतिरिक्त समय दिन. यो तपाईं नजिकैको प्रतीक्षा गर्न सक्छन् किनभने लेट भन्दा प्रारम्भिक हुन राम्रो छ. साक्षात्कार मा आइपुग्दा 10 मिनेट प्रारम्भिक तर कुनै पहिले.
राम्रो कर्मचारी रहेको समयमा काम गर्न आउने अर्थ. तपाईंको साक्षात्कार गर्न आउँदै लेट तपाईं भाडामा छन्, यदि तपाईं काम को लागि लेट हुन सक्छ कि साक्षात्कारकर्ता देखाउँछ. यो तपाईं राम्रो काम साक्षात्कार कौशल छ भने पनि भाडामा भइरहेको आफ्नो संभावना कम हुनेछ.
यो भिडियो साक्षात्कार छ भने, तपाईं अझै पनि अगाडी योजना र आफैलाई अतिरिक्त समय दिन आवश्यक छ. तपाईं एक शान्त ठाउँमा छन् भनेर पक्का गर्नुहोस् र तपाईं अवरोध प्राप्त छैन. तपाईं इन्टरनेट वा घरमा कम्प्युटर छ भने, गर्छ जसले एक मित्र पाउन र आफ्नो घरमा साक्षात्कार गर्न. उनीहरूले आफ्नो साक्षात्कार सेटअप गर्न मद्दत गर्नेछ भने पनि आफ्नो स्थानीय पुस्तकालयमा हेर्न कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. पनि एक भिडियो साक्षात्कार लागि, तपाईं तयार हुनु आवश्यक छ र प्रारम्भिक केही मिनेट प्रतीक्षा.
आफ्नो काम साक्षात्कार भिडियो कल मा हुनेछ भने पनि पेशागत. यहाँ केही व्यावसायिक देख कसरी एक साक्षात्कार लागि तयार तरिकाहरू छन्:
सधैं एक साक्षात्कार गर्न सफा लुगा लगाउने. एक साक्षात्कार गर्न जानुअघि नुहाउनु. तपाईंको दाँत माझ्छु र आफ्नो बाल comb.
धेरै आकस्मिक नगर्नुहोस्
जुत्ता लगाउने छैन वा फ्लिप-फ्लप एक साक्षात्कार गर्न. मोजा र जुत्ता लगाउने. यस्तो जिन्स वा टी-शर्ट रूपमा आकस्मिक लुगा लगाउने छैन. छोटकरीमा वा ट्यांक भन्दा माथि लगाउने छैन. टोपी लगाउने छैन, मोजा अक्षर, वा एक साक्षात्कार समयमा घाम. धेरै ठूलो र रंगीन छ भन्ने आभूषण जोगिन.
व्यापार लुगा लगाउने
मानिसहरू लागि व्यावसायिक वस्त्र हो कि जिन्स छैन प्यान्ट र बटनहरू संग लामो-स्लिभ शर्ट लगाएका अर्थ. काम धेरै पेशेवर हो भने, तपाईं एक सूट र एक टाई आवश्यक हुनेछ. महिलाको लागि, एक भद्र पोशाक वा ब्लाउज एक स्कर्ट वा स्मार्ट प्यान्ट संग स्वीकार्य हुनेछ. तर तपाईं पैसा धेरै खर्च गर्न आवश्यक छैन! तपाईं आफ्नो स्थानीय दोस्रो हात स्टोरमा राम्रो साक्षात्कार लुगा पाउनुहुनेछ, यस्तो सद्भावना रूपमा.
धूम्रपान र रक्सी जोगिन
अघि वा एक साक्षात्कार समयमा सुपारीघारी वा सुर्ती चपाउनु छैन. धूम्रपान वा एक साक्षात्कार अघि रक्सी प्रयोग गर्छन्. धूम्रपान आफ्नो लुगा खराब गंध बनाउन सक्छ. रक्सी कुनै पनि काम मा अनुमति छैन.
हात मिलाउ, तपाईं किनभने धर्म वा संस्कृति को सक्छन् नभएसम्म
हात मिलाइ साधारण हो अमेरिका मा. यसलाई हात मतलब मिलाउ स्वीकार्य छ र महिला प्रत्येक अन्य संग हात मिलाउ गर्न. तपाईं हात मिलाउ गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यो ठिक छ. सट्टा, आफ्नो छाती भरि आफ्नो हात राख्न र अलिकति अगाडी आफ्नो टाउको झुकाव. स्पष्ट भन्न, "यो तिमीलाई भेट्न त राम्रो छ. आज मलाई साक्षात्कार गर्न समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। "केही मानिसहरू हात साझेदारी गर्न चाहँदैनन् भन्ने छक्क. तपाईं आराम महसुस भने, विपरीत सेक्स हात मिलान आफ्नो धर्म विरुद्ध छ भन्ने व्याख्या.
मुस्कान र आँखा सम्पर्क बनाउन
आँखा मा मान्छे मुस्कान र हेर्न प्रयास. यो सकारात्मक र अनुकूल छन् साक्षात्कारकर्ता देखाउँछ. हुनत यो तपाईंको संस्कृति भन्दा फरक हुन सक्छ, यो तपाईं एक काम प्राप्त गर्न मद्दत गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका मा गर्न सक्छन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू एउटै हो. अमेरिका लागि, बनाउने आँखा सम्पर्क आदर देखाउँछ र you.When तपाईं साक्षात्कार मा आइपुग्दा मान्छे भरोसा गर्न मद्दत गर्छ, विभिन्न मानिसहरूले तपाईं अभिवादन हुन सक्छ. तपाईं पूरा र हेर्न र सबैलाई मा मुस्कान प्रयास सबैलाई विनम्र हुन.
बनाउन आफ्नो फोन बन्द गरिएको छ निश्चित
साक्षात्कार अघि आफ्नो फोन बन्द. तपाईँको फोन हेर्न छैन. तपाईं भूल भने, र आफ्नो फोन छल्ले, तुरुन्तै चूप र अवरोधको लागि क्षमा. जवाफ छैन!
कम्तिमा एक प्रश्न सोध्न
तपाईं काम साक्षात्कार आउन अघि, बारेमा सूची तयार5प्रश्न. प्रश्न सामान्य वा आफ्नो भूमिका बारे कम्पनी बारे हुन सक्छ. देखाउन तपाईं काम र कम्पनी इच्छुक छन् प्रश्नहरू सोध्न. के छैन तपाईं काम र व्यापार चासो देखाएका छन् सम्म तलब वा समय बन्द बारेमा प्रश्न. साक्षात्कार को अन्त मा आफ्नो प्रश्न, वा कर्मचारी भन्छन् जब, "के तपाईंको कुनै प्रश्न छन्?"यदि तपाईंको सबै प्रश्नहरू पहिले नै उत्तर गरिएको छ, त्यसपछि भन्न, "अर्को कदम के हुन्?"वा, "जब म तपाईं सुन्न आशा गर्न सक्छौं?"
आराम र आफ्नो सबै भन्दा राम्रो गर्न प्रयास
सम्झनु, तपाईंले पहिले नै पायो किनभने काम साक्षात्कार तपाईं पहिले नै मुश्किल भाग गरेका. तपाईं कसरी एक साक्षात्कार लागि तयार गर्न सिकेका छन् र तपाईं राम्रो तरिकाले तयार छन्. अब यो केवल तपाईंको उत्तम गर्न समय छ. सबैलाई साक्षात्कार समयमा गल्ती बनाउँछ. तपाईं त्रुटि बनाउन भने, रोक्न र फेरि सुरु गर्न एक क्षण लिन.
व्यापार कार्ड सोध्न
जब साक्षात्कार भन्दा छ र तपाईं छोड्न रही, तपाईं बोल्नुभयो मान्छे को व्यापार कार्ड सोध्न. जब तिनीहरूले तिमीहरूलाई तिनीहरूलाई हात, तिनीहरूलाई भद्रताका साथ धन्यवाद. तिनीहरूले एक व्यापार कार्ड छैन भने, तिनीहरूको पूरा नाम र इमेल ठेगाना लेख्न अनुरोध. यो बाटो, तपाईंले तिनीहरूलाई तपाईं ध्यान दिनुहोस् धन्यवाद पठाउन सक्छन् तपाईं आफ्नो सम्पर्क जानकारी हुनेछ.
काम साक्षात्कार पछि इमेल एक धन्यवाद वा पत्र पठाउन
तपाईं हुलाक कार्यालय मार्फत वा इमेल द्वारा एक एक पत्र रूपमा ध्यान दिनुहोस् धन्यवाद पठाउन सक्नुहुन्छ. अधिकांश मानिसहरू इमेल प्रयोग. के तपाईं व्यापार कार्ड लागि अनुरोध गर्न बिर्सनुभयो भने, इमेल गर्न वा कार्यालय कल र सम्पर्क जानकारी को लागि अनुरोध.
तपाईंको धन्यवाद तपाईं ध्यान दिनुहोस्, तपाईं उल्लेख गर्नुपर्छ:
तपाईं तिनीहरूले तपाईं साक्षात्कार खर्च समय को लागि कृतज्ञ छौं कि
तपाईं के कौशल कम्पनी गर्न ल्याउन सक्छ
त्यो तपाईं चाँडै तिनीहरूलाई देखि सुनवाई गर्न तत्पर
तलका ध्यान दिनुहोस् धन्यवाद एउटा उदाहरण हो:
प्रिय [साक्षात्कारकर्ता नाम],
आज मेरो साथ बैठक लागि धेरै धेरै धन्यवाद. यो टोली र स्थिति बारेमा थप जान्न यस्तो खुशी थियो. म मौका सामेल बारेमा धेरै उत्साहित छु [कम्पनी को नाम] र मदत [आफ्नो ग्राहकहरु / केहि सेवा तपाईं गरिरहेको हुनेछ / नयाँ ग्राहकहरु मा ल्याउन] तपाईंको टोलीसँग.
म राखने प्रक्रियामा अर्को कदम बारेमा देखि सुनवाई गर्न तत्पर. कृपया म थप जानकारी प्रदान गर्न सक्छन् भने मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्.
प्रतिक्रियाको लागि अनुरोध
तपाईं काम प्राप्त छैन भने, तपाईं साक्षात्कार लागि तिनलाई धन्यवाद टिप्पणी आफ्नो साक्षात्कारकर्ता पठाउन. तिनीहरूलाई सोध्न तिनीहरू तपाईं काम प्राप्त किन छैन प्रतिक्रिया दिन भने. तपाईं थप जब लागि साक्षात्कार मा योजना र सुधार गर्न चाहनुहुन्छ कि तिनीहरूलाई बताउन. सबैलाई तपाईं जवाफ हुनेछ, तर तिनीहरूलाई केही तपाईं अर्को समय सफल मदत गर्नेछ केही टिप्पणीहरू हुन सक्छ!
अब तपाईं कसरी एक साक्षात्कार लागि तयार थाहा - के अर्को?
यो जानकारी को एक धेरै छ. तर कसरी काम साक्षात्कार लागि तयार थाह तपाईं सिक्न सक्छौं सबै भन्दा राम्रो कुरा को छ. जागिर फेला संयुक्त newcomers लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ. हामी सफलता को बाटो मा तपाईं समर्थन गर्न चाहनुहुन्छ.
आफ्नो शहर मा रोजगार को अवसर खोज्न
थप जब र क्यारियर स्रोतहरू फेला
निःशुल्क कार्यस्थल अंग्रेजी सिक्न साइन अप
तपाईं थप क्यारियर प्रश्न गर्छन्?
हाम्रो फोरम मा सल्लाह को लागि अन्य शरणार्थी र आप्रवासी सोध्न.